फलेवास- ७ आँटिघरे पौडेल वन्धुहरुको कुल पुजा सुरु, लाखवत्ति प्रज्वलन र भजन कीर्तन ! – ebaglung.com
फलेवास- ७ आँटिघरे पौडेल वन्धुहरुको कुल पुजा सुरु, लाखवत्ति प्रज्वलन र भजन कीर्तन !
२०७५ असार १३, बुधबार १७:२५	Top News, थप समाचार
निर्मल पौडेल पर्वत २०७५ असार १३ । पर्वतको फलेवास नगरपालिका ७ लिमिठाना आँटिघरका आत्रेय गोत्रका पौडेल वन्धुहरुले यसवर्षको कुलपुजा विशेष रुपमा गर्ने भएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा दियाली पुर्णिमा ,मष्टा, ज्याःपुन्हिका दिन गर्ने भएपनि यसपालि एकदिन अगाडिनै वन्धुवान्धव जम्मा भई मन्दिरमा मुल दीप र लाखवत्ति जलाएका हुन् ।
कुल पुजा गर्न पौडेल वन्धुहरु देश विदेशबाट जम्मा भइ वुधवार पितृहरुको नाममा लाखवत्ति जलाएर दिनभर भजनकीर्तन गर्दै नाचगानमा व्यस्त भए । पुर्खौँदेखि पौडेल भाईवन्धुहरुले कुल देवतालाई देवताहरुका पनि देवता भन्दै वराह काली कुलका रुपमा मान्दै आएका छन् ।
आँटिघरे पौडेल वन्धुहरु जिल्लाका केहि स्थानहरु र देशका अन्य विभिन्न ठाउँहरु कुस्मा ,पोखरा, काठमाडौ, वुटवल, चितवन लगायत जिल्लाहरुमा वस्दै आएका छन् । त्यस्तै भारतका केहि स्थानहरुमा वसाईँ सरि गएका पनि जम्मा भएर खुशीयाली साटिरहेका छन् । दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा जेष्ठ सदस्य ८९ वर्षिय पुर्णभद्र पौडेलले देशमा ४० लाख भन्दा धेरै पौडेलहरु भएको भन्दै सवै पौडेलहरु एक हुन आव्हान गरे । कुल पुजा पौडेल वन्धुका जेष्ठ सदस्यले आफ्नो संस्कार अनुसार गर्ने प्रचलन रहिआएको भुवानी प्रसाद पौडेलले ईबागलुङलाई जानकारी दिए । पौडेल वन्धुहरुले कुल पुजालाई दँशै तिहार जस्ता चाडहरुलाई भन्दापनि विशेष रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
सिगानामा जेष्ठ नागरिकहरुलाई नि:शुल्क आँखा शिविर : ६० जनालाई चश्मा वितरण !
रेसुंगा नगरपालिकाको सोँच देखेर जनताले हाने झटारो- ‘प्लाष्टिकले छेकेर’नि पहिरो रोकिएला ?’